नेपाल सरकारले युवामैत्री विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा सपना बाँडिरहेको छ। बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भनिरहेको छ। बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारले थप सहयोग गर्नुपर्ने, नयाँ आयोजनाहरू ल्याएर स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने,
दसैँ हाम्रो घर–आँगनमा आइसकेको छ। गाउँ, शहर जताततै दशैँको चहलपहल शुरू भइसकेको छ। देश–विदेशबाट धमाधम गाउँघरमा फर्किनेहरूको चाप बढेको छ। दशैँको यो लहरले गाउँ, शहर तातेको छ। बजारमा किनमेल गर्नेको
नेपालमा कच्चापदार्थको कमी छैन। विगत लामो समयदेखि स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आवाज उठ्दै आए पनि राज्यले उचित कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र भएका व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी
नेपाली युवामा वैदेशिक रोजगारीको मोह बर्सेनी बढ्दो छ। सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न नसक्दा चाहेर या नचाहेर ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन हुनुपर्ने नियति छ। दैनिक औसत १५ सय युवा
किरिमिरी र नबुझिने अक्षर लेखेको देखियो भने ‘कस्तो डाक्टरी अक्षर लेखेको’ भनेर विशेषण दिने गरिन्छ। अरुले सहजै नबुझ्ने अक्षर लेख्न सकेकोमा नेपाली डाक्टरहरू गर्व मान्छन्। डाक्टर पेसाले नै ठूलो हो
सबै नेपालीले बिमा गर्न जरुरी
नेपालमा केही समयपहिले छ्यापछ्याप्ती मौलाएको नेटवर्किङ व्यापारमा बिमा गर्नेलाई असर गरेको छ । नेपालको बिमा बजार अहिले सानो र साँघुरो अवस्थामा छ । बिमा कम्पनीहरूको संख्यात्मक वृद्धि र कारोबारका आधारमा
कहिलेसम्म भारतीय बजार धाउने ?
हामी यहाँका सबै किनमेलका लागि सधैँभरि रुपैडिहा जानुपर्ने बाध्यता छ । रुपैडिहाका पसलमा नेपाली ग्राहकको खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । यहाँका व्यापारी भने झिँगा धपाएर बस्नुपरेको अवस्था छ । नेपालगञ्जमै
स्याङ्जाका भूकम्पपीडितले राहत नपाएको गुनासो गरे पनि स्थानिय निकायले चासो दिएको छैन । यहाँका भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म पहिलो किस्तासमेत पाउन नसकेको बताइरहँदा पनि यहाँका जनप्रतिनिधि कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।
बैतडी–दार्चुला जोड्ने पुल मर्मत होस्
बैतडी–दार्चुला जोड्ने चमेलिया नदीमा हरेको पक्की पुल जीर्ण बन्दै गएको छ । यसको पुनर्निर्माणमा कसैको ध्यान गएको छैन । आर्थिक वर्ष २०५९÷६० मा निर्माण गरिएको पुलले बैतडीलाई दार्चुलासँग जोडेको छ
बुङ्गमतीजस्ता सम्पदा बस्तीको मौलिक ढङ्गमा पुनर्निर्माण हुनु जरुरी छ । सम्पदा बस्तीभित्रका घर मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण भएमा नेपालको मौलकिता खलल नहुने देखिन्छ । बुङ्गमतीको मौलिक स्वरुपमा पुनर्निर्माण गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा
बौद्ध अध्ययन केन्द्र बनाउन पहल गरौं
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बौद्ध अध्ययन केन्द्र बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । वि.सं. २०६१ मा स्थापना भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई बौद्ध अध्ययन केन्द्र बनाउन सरकारीस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
बेरोजगारी न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको पहल खोइ ?
बेरोजगरी समस्या हल गर्न स्थानीय सरकारले पहल नगरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले त्यसै अनुरुपका कार्यक्रम नल्याउँदा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा समस्या सिर्जना भएको छ । समस्या न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारले थप
चाडबाडको खानपानमा सतर्क हुनुस्
दशैँ–तिहार नजिकिएको छ । चाडबाडमा सबै नेपालीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा खानपान नै हो । खानपानका कारण विश्वमा धेरै मानिस रोगी हुँदै गइरहेका छन् । नेपालमा झन् यसको अवस्था दर्दनाक छ
विद्यार्थी कसरी टिकाउने ?
यहाँ समयमा उत्साहपूर्वक विद्यार्थी भर्ना भए पनि कक्षा छाड्नेको संख्या व्यापकरुपमा बढेको देखिएको छ । उमेर पुगेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने सरकारको नीतिअनुसार भर्ना अभियान नै लिएर वैशाख महिनाभर
नेतृत्वविहीन अवस्थामा नेपाल स्काउट
वि.सं. २००९ असार ५ गते तत्कालीन राजा श्री ५ त्रिभुवन वीरविक्रम शाहदेव सरकारको बाहुलीबाट नारायणहिटी राजदरबारमा विधिवत् झन्डोतोलन गरी स्थापना भएको संस्था नेपाल स्काउट । श्री ५ को संरक्षक–संरक्षिकाबाट २०४५
सहकारी ऐन नबन्दा समस्या
सरकारी ऐन नबन्दा यहाँका सहकारी संस्थालाई काम गर्न समस्या भएको छ । स्थानीय तहहरूले समयमै सहकारी ऐन बनाउन नसक्दा सहकारी संस्था अलमलमा समेत परेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज
स्थानीय सरकार उत्तरदायी हुने कहिले ?
सुशासन र पारदर्शीताको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने र भए गरेका कमी कमजोरीहरुको खवरदारी गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय संचार संस्थान वा संचार माध्याम नै हो । संचार माध्यामहरुको गलत प्रयोग गर्नुले
गुनासाहरु घट्दै जाने आशा
स्थानीय सरकारहरुले कार्यप्रगतीको एक वर्ष बिताएपछि पनि चेत नखुलेको जस्तो देखिएको छ । स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिहरु केटाकेटी पारा अझै छाडेका छैनन । जनताका समस्या सुननको साटो आफ्नो पुरानो पारा नछडेको
गरिबको सूचीमा पर्ने धनीलाई दुई शब्द
नेपालका मन्त्रीले गरिबको सूचीमा आफ्नो नाम लखाएको खबरले बजार निकै ततायो । मानिस चाहेर गरिब बन्न चाहँदैन । तर, पछिल्लो समय गरिब बन्ने होड चलिरहेको छ । भूमिहीन र सुकुमबासीको
बेरोजगरी समस्या हल गर्न स्थानिय सरकारले पहल नगरेको पाइएको छ । स्थानिय सरकारले त्यसै अनुरुपका कार्यक्रम नल्याउँदा बेरोजगारी समस्या न्यूनिकरणमा समस्या सिर्जना भएको छ । समस्या न्यूनिकरणमा स्थानीय सरकारले थप